कुखुरा खान सुरक्षित छ ? – Health Post Nepal
कुखुरा खान सुरक्षित छ ?
२०७६ वैशाख २० गते १०:०८
बर्डफ्लुका नामले चिनिने एभियान इन्फ्लुएन्जा एच५एन१को नेपालमा पहिलोपटक मानवमा संक्रमण प्रमाणित भएसँगै यो रोग के हो, कसरी सर्छ लगायत चासो सर्वत्र पाइएको छ । रोगबारे सही जानकारीले यसबाट जोखिन मद्दत गर्छ । त्यसका लागि आमजनमानसमा हुन सक्ने बर्डफ्लुसम्बन्धी जिज्ञासा र तीनको समाधान हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
एच५एन१ के हो ?
एच५एन१ एकप्रकारको अत्यधिक संक्रमण हुने इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो । यसले चराचुरुंगीमा श्वास–प्रवासको समस्या गराउँछ । एच५एन१को मानिसमा संक्रमण कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ । तर, यो मानिसबाट मानिसमा सितिमिती सर्दैन । जब यसले मानिसमा संक्रमण गर्छ, तब मानिसको मृत्युदर लगभग ६० प्रतिशत हुन्छ ।
एच५एन१ इन्फ्लुएन्जा मानिसमा कसरी फैलिन्छ ?
एच५एन१को लगभग सबै संक्रमण प्रत्यक्ष संक्रमित वा मृत पक्षीहरू वा एच५एन१ प्रदूषित वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसले मानिसलाई सजिलै संक्रमित गर्दैन र यो मानिसबाट मानिसमा सामान्यतया सर्दैन । राम्रो तरिकाले तयार गरेको र राम्रो तरिकाले पकाएको खानाको माध्यमबाट मानिसलाई यो रोग फैलिन सक्ने वा सरेको कुनै पनि प्रमाण छैन ।
एच५एन१ले किन धेरै चिन्तित बनाएको छ ?
चराचुरुंगीमा संक्रमण गर्ने यो भाइरसले मानिसलाई संक्रमित गरेमा मानिसमा यसले गम्भीर समस्याहरू हुने र अंग–प्रत्यंगले काम गर्न नसक्ने बनाउँछ र मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ । मानिसमा यसको संक्रमण भएमा यसको मृत्युदर उच्च छ । त्यस्तै, कुनै पनि भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । त्यसैले यदि एच५एन१ सजिलै परिवर्तन भयो र मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ, त्यसैले यसबारे धेरै गम्भीर चिन्ता हुने गरेको हो ।
किन एच५एन१ इन्फ्लुएन्जा भाइरस परिवर्तन हुन सक्छ ?
इन्फ्लुएन्जा भाइरसले नियमित आफ्नो वंशानुगत गुणहरू परिवर्तन गर्छ । यदि मानिसमा सजिलै सर्न सक्ने भएमा समस्या हुन्छ ।
मानिसमा यस इन्फ्लुएन्जा के–के लक्षण हुन्छन् ?
– उच्च ज्वरो आउनु
– खोकी लाग्नु
– घाँटी दुख्नु
– मांसपेसीहरू दुख्नु
– सुरुमा पेट दुख्ने, छाती दुख्ने, पखाला लाग्नेसमेत हुन सक्छ,
– संक्रमण छिटै फैलिएर सास फेर्न गाह्रो हुनु, तीव्र रूपमा श्वास–प्रश्वासमा कठिनाइ देखापर्नु, निमोनिया हुनु, दम हुनु आदि ।
कुखुरा र कुखुराजन्य उत्पादन तथा अन्य चराचुरुंगी खान सुरक्षित हुन्छन् ?
अवश्य पनि हुन्छन् । तर, यसका लागि राम्ररी तयार गरी पकाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्य भाइरसझैँ यो भाइरसका लागि पनि तातो धेरै नै संवेदनशील हुन्छ । सामान्य खाना पाक्ने तापक्रममा यो भाइरस पूर्ण रूपमा मर्दछ । तर, पकाउँदा विचारणीय कुरा के हो भने पकाइएका सबै भागहरूमा न्यूनतम ७० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्नुपर्दछ । अर्थात्, राम्ररी सबैतिर तापक्रम पुगेर सबै भागमा पाकेको हुनुपर्दछ । यसले सबै भाइरस मर्दछन् र हामीले ढुक्कले खान सक्छौँ ।
सावधानीका रूपमा कुखुरा तथा कुखुराजन्य उत्पादन तथा अन्य चराचुरुंगी सधैँ राम्रो, स्वस्थ, स्वच्छ हुनुपर्दछ र राम्रो तरिकाले पकाएको हुनुपर्दछ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको समेत सुझाब छ ।
आजसम्म पनि यस भाइरसको धेरै संक्रमण घरायसी रूपमै पाल्ने, काट्ने तथा रोग लागेर मरेका चराहरूलाई चलाउने, प्रयोग गर्ने वा ओसार–पसार गरेकाहरूसँग जोडिएको पाइएको छ । त्यसैले यसकिसिमका बानी–व्यवहारलाई उच्चतम जोखिम बुझेर सुधार गर्नुचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मानिसमा यसको उपचार कसरी गरिन्छ ?
यो मानिसमा प्रायः गम्भीर रोगका रूपमा विकास भएर देखापर्ने हुँदा सुविधायुक्त अस्पतालहरूमा आकस्मिक सघन उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । एन्टिभाइरल औषधि ओसेल्टामिभिर (टामिफ्लु)ले बिरामीको गम्भीरता घटाउन र मृत्यु रोक्न सक्ने भएकाले यसको प्रयोग गरिन्छ ।
एच५एन१ एभियान इन्फ्लुएन्जाको मानव संक्रमण रोकथामका लागि खोप उपलब्ध छ ?
एच५एन१ संक्रमणको रोकथामका लागि खोपको विकास भएको छ, तर यो अझै पनि व्यापक उपयोगका लागि तयार छैन ।
के मौसमी इन्फ्लुएन्जा (मौसमी फ्लु/मौसमी रुघाखोकी) खोपले एच५एन१ भाइरसविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ ?
मौसमी इन्फ्लुएन्जाको खोप एच५एन१विरुद्धको संक्रमणमा काम गर्दैन अर्थात् सुरक्षित बनाउन सक्दैन ।
किन हुन्छ युटीआइ? के हुन् यसका घरेलु र आयुर्वेदिक समाधानका उपाय?
किन स्वाँस्वाँ हुन्छ?
के हो छालामा चमक ल्याउने ग्लुटाथिओन? केबाट पाइन्छ?
बालबालिकालाई पनि हुनसक्छ दम
यी हुन् हाँस्नुका १० फाइदा
कति घण्टा सुत्नुपर्छ स्वस्थ रहन?
के हुन् ‘लू’ का असर, कसरी जोगिने?
किन आवश्यक छ मुखको सरसफाई?